Xildhibaano diiday guddiga maamulka Baydhabo
Magalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay shir ay iskugu yimaadeen qaar ka mid ah Xildhibaano kasoo horjeeda mamulka saddexda gobal oo dhowaan heshiis uu ku dhexmaray magalada Muqdisho.
Xildhibaan Cumar Maxamuud Maxamed oo ka mid ahaa xildhibaanadii shirka ka qayb galay ayaa VOA galabta u sheegay inaysan raali ka ahayn qaabkii loo maray heshiiska mamulka koonfur galbeed ee ka kooban Gobalada Bay,Bakool iyo Shabeellada dhexe isla markasna uu dhibaato horseedi karo waa sida uu sheegay.
Cumar Maxamuud ayaa sheegay Xildhibaanadda shirkan qaatay inay yihiin beesha Hawiye ayna dareenkooda diidnimo mamulka saddexda gobal ay aduunka u cadaynayaan.
Dhowaan Ra'iisul wasaraha DF Cabdiwali Shiikh Axmed ayaa digteero kusoo saaray guddiga farsamadda dhismaha mamulka saddexda gobal kuwaasoo ka kooban 18-xubnood.
Marka laga tago hadalka Xildhibaankan waxaa kaloo jira diidmo kasoo baxay dhowaan Madoobe Noonow Maxamed oo sheegtay inuu yahay madaxwaynaha lixda Gobalka wuxuna isagoo ku sugan magalada Baydhabo uu sheegay inaysan heshiiska Muqdisho ka dhacay uu yahay mid aan waxba ka jirin isla markasna aan loo dhamayn.
Baydhabo ayaa lagu wadaa dhowan in lagu qabto doorashada mamulka saddexda Gobal iyadoona mamulkaasi ay soo dhaweeyeen mamuladda Puntland iyo Jubba.